Laber® U Profile Glass Warshadaha | Soosaarayaasha Shiinaha ee Laber® U Profile Glass, Soo Saarayaasha
Profile Glass & Ceramic Frit & Qabow-Ku-U hooseeya E Profile Glass / U Dhalada Muraayadda
Muraayadaha Aasaasiga ah ee Muuqaalka Muuqda ee Muhiimka ah ee dhalada ah ayaa ah galaas midab leh kaas oo yaraynaayo labadaba aragtida iyo gudbinta iftiinka. Muraayada cajiinka ah waxay had iyo jeer u baahan tahay daaweynta kuleylka si loo yareeyo walwalka kuleylka iyo burburka ka dhalan kara waxayna dib u soo celineysaa kuleylka la nuugo. Waxyaabaha muraayadda u leh ee muraayadda U u muuqda ayaa leh midabyo kala duwan waxaana loo kala saaraa gudbinta iftiinka. Waxaa lagu talinayaa inaad dalbato samballada muraayadaha dhabta ah ee matalaadda midabka dhabta ah. Shumacyada midabada leh waxaa lagu ridayaa 650 digrii Celsius dhinaca b ...
Muraayadaha macluumaadka aasaasiga ah U galaas galaas ama loo yaqaan dhalada U kanaalka dhalada ayaa asal ahaan kasoo jeeda Austria. Waxaa sidoo kale lagu soo saaray Jarmalka in ka badan 35 sano. Sida mid ka mid ah agabka caadiga ah ee loo isticmaalo mashaariicda dhismaha-baaxadda weyn, dhalada U profile dhalada waxaa si ballaaran loogu dabaqayaa Yurub iyo Ameerika. Codsiga muraayadda U ee muraayadda u gaarka ah ee Shiinaha waxaa laga soo billaabey 1990-maadkii. Hadana aagag badan oo Shiinaha ah ayaa u adeegsada qaabkeeda qaab-dhismeedka caalamiga ah. Muraayadaha U profile waa nooc ka mid ah muraayadaha wax lagu tuuro. Waa horumar laga sameeyay sameynta t ...
Macluumaadka Aasaasiga ah ee birta U hooseeya U muuqaallada qalabka korantada muraayadaha dhalooyinka (UBIPV) waxay isku daraan faa'iidooyinka dhismayaasha muuqaalka u sameynta muraayadda U iyo nidaamka abuurista tamarta qorraxda si kor loogu qaado ilaalinta deegaanka cagaaran iyo badbaadinta tamarta iyo yareynta qulqulka. UBIPV iyo magaalada waa la iskugu dari karaa si sawirka loo sameeyo qayb ka mid ah nolosha aadanaha. Kaliya maahan shey dhisme ah, laakiin waxay sidoo kale gaari kartaa ujeedooyin keydinta tamarta iyo ujeedooyinka dhalinta tamarta, sidoo kale waa la iskugu dari karaa ...
Muraayadaha aasaasiga ah ee muraayadda U - galaas galaas - isku darka aesthetics iyo utility Xulka dhalada ee dhismayaasha ama qeyb xafiis waa in aan loo qaddarin. Waa inaad had iyo jeer sahmiso xulashooyinkaaga si aad ugu dambeyso midka sawirka-kaamil ah. Haddii tani tahay waxa aad hadda sameyneyso, muraayadda 'U profile glass' waxaa mudan in laga fiirsado. Kaliya kaliya uma muuqato mid soo jiidasho leh, laakiin noocan oo kale ah muraayadaha U profile galaas / galaaska U channel waxay sidoo kale ku faantaa guryo fara badan oo ka dhigaya mid ku habboon bannaanka iyo gudaha ...